ကြောငျးသူမလေး အလောငျးကို ကယျဆယျရေးအဖှဲ့တှေ တောငျအောကျဆငျးပွီး သှားဆညျယူနတေဲ့ (ရုပျ/သံ) . . . - Myitter
ကြောငျးသူမလေးအလောငျးကို ကယျဆယျရေးအဖှဲ့တှေ တောငျအောကျဆငျးပွီး သှားဆညျယူနတေဲ့ Live (ရုပျ/သံ)
ပြောကျဆုံးနတေဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသူမလေးအလောငျးကို ကယျဆယျရေးအဖှဲ့တှေ တောငျအောကျဆငျးပွီး သှားဆညျယူနတေဲ့ Live (ရုပျ/သံ)
မနကေ့ရရှိလာသော ဆိုငျကယျသော့တှရှေိ့သညျ့နရောသို့ သခြောတဲ့အဖွတေဈခုရဖို့အတှကျ ယနမေ့နကျ (၂၇.၆.၂၀၂၀) ဘားအံမွို့နယျမီးသတျတပျဖှဲ့ မွနျမာနိုငျငံလူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့ မာဃလူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့တို့ (၃) ဖှဲ့ဦးစီးပွီး တခွားသော အဖှဲ့မြားနှငျ့ယနထေ့ပျမံ ပူးပေါငျးရှာဖှကွေမှာဖွဈပါတယျ။
မနကေ့အကူအညီတောငျးလို့ Drone အဖှဲ့တှကေလဲ ကူညီရှာဖှဖေို့ ရောကျရှိလာကွပါပွီး။ သတငျးထူးမြားရှိခဲ့လြှငျ..သိရှိတာနဲ့မှနျကနျသောသတငျးမြားသာတငျပွပေးပါမညျ။
ပြောကျဆုံးနသေောကောငျမလေး၏ဖွဈစဉျနှငျ့ကူညီကယျဆယျရေးဖွဈစဉျအကဉျြး (လူတှကေမသိတော့ သို့လောသို့လောထငျမွငျယူဆခကျြတှမေဖွဈကွဖို့ ဒီစာလေးဖတျပေးကွပါ)
အမညျ – ဇာခွညျမွငျ့မွတျ အသကျ – ၂၀ ယခုနထေိုငျဆဲလိပျစာ-ဘားအံမွို့-အမှတျ(၆)ရပျကှကျ၊ပွညျထောငျစု ဘုရားကုနျးလမျးအဆောငျ။
ကွာသပတေးနေ့(၂၅.၆.၂၀၂၀) မေးမွနျးခကျြမြားအရ အဆိုပါကောငျမလေးသညျ ကွာသပတေးနလေ့ညျတှငျ သူငယျခငျြးဖွဈသူနဲ့မုနျ့စားပွီးအပွနျတှငျ ညနေ ခနျ့မှနျး ၃နာရီနောကျပိုငျးတှငျ ဇှဲကပငျတောငျပျေါသို့ တဈဦးထဲတောငျပျေါသို့တကျရောကျသှားကွောငျးသိရှိရပါသညျ။
ယခုလကျရှိသူမနထေိုငျသောအဆောငျအိမျကလဲ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုထိ ပွနျမလာသေးတာကွောငျ့ စိတျပူကာဖုနျးဆကျသျောလညျးမရသဖွငျ့ လိုကျလံရှာဖှခေဲ့ကွပါတယျ။
ညပိုငျးရောကျတော့ တောငျပျေါတကျသှားကွောငျးသတငျးရရှိသညျနှငျ့ ညပိုငျးဇှဲကပငျတောငျပျေါတကျဖို့ ကြှနျတေျာ့ကိုလဲအကူအညီတောငျးခဲ့ပါသညျ။
ညတှငျးခငျြးကြှနျတျောအပါအဝငျ ကိုတိုးနှငျ့လူမှုကူညီရေးအသငျးမာဃမှ တဈကိုယျတျောနောငျနှငျ့ ရှိုငျးသူရ တို့နှငျ့ ၄ဦးအပါအဝငျ ည ၁၂:၃၀ အခြိနျ ကူညီဖို့အတှကျသှားရောကျပေးခဲ့ကွပါတယျ။
ရောကျတဲ့အခြိနျ ကညညျ့နကျနတေော့ မနကျမှာ ဝိုငျးဝနျးကုညီဆောငျရှကျပေးဖို့ ဘားအံမီးသတျတပျဖှဲ့ကို ည ၃နာရီလောကျသှားရောကျအကွောငျးကွားပေးခဲ့ပါတယျ။
မီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျမြားကလဲ မနကျ ၅နာရီ အလငျးရောငျစတငျထှကျရှိခြိနျ၌ အငျတိုကျအားတိုကျ ရှာဖှမှေုပွုလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ သောကွာနေ့(၂၆.၆.၂၀၂၀) မီးသတျတပျဖှဲ့မြား သောကွာနေ့ မနကျ ၅နာရီဝနျးကငျြမှစတငျ၍ရှာဖှမှေုမြားပွုလုပျရာ .
တောငျခွတှေငျဆိုငျကယျနှငျ့ တောငျပျေါတှငျခြှတျထားခဲ့သောဖိနပျကိုသာတှရှေိ့ပွီး အခွားသောထူးခွားမှုမြားမတှရှေိ့တာကွောငျ့ မှနျးလှဲ ၂:၃ဝခနျ့တှငျတောငျခွသေို့ပွနျဆငျးလာခဲ့ကွပါတယျထိုစဉျတောငျပျေါမှ ဆငျးလာသော ဒသေခံနှဈဦးထံမှ ဇှဲကပငျတောငျ တောငျအစှနျးကြောကျကွားအတှငျး ဆိုငျကယျသော့ကောကျရထားလို့ အလှူခံဌာနမှာ လာအပျကွပါတယျ။
လာအပျတဲ့သော့နဲ့ ပြောကျဆုံးနသေောကောငျမလေးရဲ့ဆိုငျကယျကို ဖှငျ့ကွညျ့တော့ဖှငျ့လို့ရတာကွောငျ့ ဟုတျမှနျကွောငျးအတညျပွုလိုကျပါတယျ။
အဲ့ဒီညနေမှာပဲ သော့ရရှိတဲ့နရောကိုအမှတျအသားပွုပွီး စနနေမေ့နကျမှာ အဖှဲ့တှအေားလုံးပေါငျးပွီးပိုကျစိတျတိုကျရှာဖှမှောဖွဈပါတယျ။
ကျောင်းသူမလေးအလောင်းကို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ တောင်အောက်ဆင်းပြီး သွားဆည်ယူနေတဲ့ Live (ရုပ်/သံ)
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမလေးအလောင်းကို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ တောင်အောက်ဆင်းပြီး သွားဆည်ယူနေတဲ့ Live (ရုပ်/သံ)
မနေ့ကရရှိလာသော ဆိုင်ကယ်သော့တွေ့ရှိသည့်နေရာသို့ သေချာတဲ့အဖြေတစ်ခုရဖို့အတွက် ယနေ့မနက် (၂၇.၆.၂၀၂၀) ဘားအံမြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ မာဃလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့ (၃) ဖွဲ့ဦးစီးပြီး တခြားသော အဖွဲ့များနှင့်ယနေ့ထပ်မံ ပူးပေါင်းရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ကအကူအညီတောင်းလို့ Drone အဖွဲ့တွေကလဲ ကူညီရှာဖွေဖို့ ရောက်ရှိလာကြပါပြီး။ သတင်းထူးများရှိခဲ့လျှင်..သိရှိတာနဲ့မှန်ကန်သောသတင်းများသာတင်ပြပေးပါမည်။
ပျောက်ဆုံးနေသောကောင်မလေး၏ဖြစ်စဉ်နှင့်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်စဉ်အကျဉ်း (လူတွေကမသိတော့ သို့လောသို့လောထင်မြင်ယူဆချက်တွေမဖြစ်ကြဖို့ ဒီစာလေးဖတ်ပေးကြပါ)
အမည် – ဇာခြည်မြင့်မြတ် အသက် – ၂၀ ယခုနေထိုင်ဆဲလိပ်စာ-ဘားအံမြို့-အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ပြည်ထောင်စု ဘုရားကုန်းလမ်းအဆောင်။
ကြာသပတေးနေ့(၂၅.၆.၂၀၂၀) မေးမြန်းချက်များအရ အဆိုပါကောင်မလေးသည် ကြာသပတေးနေ့လည်တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့မုန့်စားပြီးအပြန်တွင် ညေန ခန့်မှန်း ၃နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်သို့ တစ်ဦးထဲတောင်ပေါ်သို့တက်ရောက်သွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ယခုလက်ရှိသူမနေထိုင်သောအဆောင်အိမ်ကလဲ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ပြန်မလာသေးတာကြောင့် စိတ်ပူကာဖုန်းဆက်သော်လည်းမရသဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။
ညပိုင်းရောက်တော့ တောင်ပေါ်တက်သွားကြောင်းသတင်းရရှိသည်နှင့် ညပိုင်းဇွဲကပင်တောင်ပေါ်တက်ဖို့ ကျွန်တော့်ကိုလဲအကူအညီတောင်းခဲ့ပါသည်။
ညတွင်းချင်းကျွန်တော်အပါအဝင် ကိုတိုးနှင့်လူမှုကူညီရေးအသင်းမာဃမှ တစ်ကိုယ်တော်နောင်နှင့် ရှိုင်းသူရ တို့နှင့် ၄ဦးအပါအဝင် ည ၁၂:၃၀ အချိန် ကူညီဖို့အတွက်သွားရောက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ရောက်တဲ့အချိန် ကညည့်နက်နေတော့ မနက်မှာ ဝိုင်းဝန်းကုညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဘားအံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကို ည ၃နာရီလောက်သွားရောက်အကြောင်းကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကလဲ မနက် ၅နာရီ အလင်းရောင်စတင်ထွက်ရှိချိန်၌ အင်တိုက်အားတိုက် ရှာဖွေမှုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့(၂၆.၆.၂၀၂၀) မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ သောကြာနေ့ မနက် ၅နာရီဝန်းကျင်မှစတင်၍ရှာဖွေမှုများပြုလုပ်ရာ .
တောင်ခြေတွင်ဆိုင်ကယ်နှင့် တောင်ပေါ်တွင်ချွတ်ထားခဲ့သောဖိနပ်ကိုသာတွေ့ရှိပြီး အခြားသောထူးခြားမှုများမတွေ့ရှိတာကြောင့် မွန်းလွဲ ၂:၃၀ခန့်တွင်တောင်ခြေသို့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်ထိုစဉ်တောင်ပေါ်မှ ဆင်းလာသော ဒေသခံနှစ်ဦးထံမှ ဇွဲကပင်တောင် တောင်အစွန်းကျောက်ကြားအတွင်း ဆိုင်ကယ်သော့ကောက်ရထားလို့ အလှူခံဌာနမှာ လာအပ်ကြပါတယ်။
လာအပ်တဲ့သော့နဲ့ ပျောက်ဆုံးနေသောကောင်မလေးရဲ့ဆိုင်ကယ်ကို ဖွင့်ကြည့်တော့ဖွင့်လို့ရတာကြောင့် ဟုတ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီညေနမွာပဲ သော့ရရှိတဲ့နေရာကိုအမှတ်အသားပြုပြီး စနေနေ့မနက်မှာ အဖွဲ့တွေအားလုံးပေါင်းပြီးပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ်။